Motivation တက်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲ ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Knowledge » Motivation တက်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲ ?
တစ်ခါတစ်ရံမှာမိမိရဲ့ စီးပွားရေး ပညာရေး စတာတွေအတွက် ကြိုးစားဖို့စိတ်ပျက်အားလျော့နေတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရှိသင့်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြမဲ့နည်းလမ်းတွေထဲကအနည်းဆုံးတစ်ချက်တော့သင့်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။